Botswana clarifies Zimbabwe deportations – Nehanda Radio
On Apr 20, 2020 16,696
Botswana has dismissed reports circulating on social media alleging that the neighbouring country has embarked on forceful deportations of more than 200 Zimbabweans from its territory as part of efforts to curb the spread of Covid-19.
In a statement posted on its official Twitter Page, Botswana’s International Affairs and Cooperation Ministry said the recent repatriation exercise was undertaken jointly with Zimbabwe following requests by Zimbabweans who wanted to be assisted to return home when the neighbouring country imposed lockdown measures.
“The Ministry of International Affairs and Cooperation notes with deep concern the misinformation and distorted reports on social media platforms purporting that the Government of Botswana has embarked on forceful deportation of Zimbabwean nationals.
Aug 23, 2013 234
“The assertion being made is completely inaccurate and the fact of the matter is that the recent repatriation exercise was undertaken jointly with the Government of Zimbabwe, following requests from Zimbabwean nationals who wanted to be assisted to return home amid the coronavirus (Covid-19) pandemic and the lockdown measures put in place,” read the statement.
Botswana said the latest group of 255 returnees brought into the country on Thursday last week through Ramokgwebana Border Post were voluntarily repatriated by road and received by Zimbabwean authorities.
The statement said Botswana and Zimbabwe enjoy excellent relations dating back to the days of the liberation struggle.
“In appreciating the consequences of the lockdown on movement restrictions and in keeping with the spirit of the exercise, none of the repatriated individuals was charged for breaching immigration rules,” reads the statement
The Ministry said Botswana and Zimbabwe remain committed to working closely together in responding to the Covid-19 outbreak and mitigating its impact on both countries as well as on the livelihood of their nationals. The Chronicle
Jul 13, 2020 16,190
Jul 13, 2020 9,389
Jul 13, 2020 36,081
Jul 13, 2020 35,446
Jul 13, 2020 15,887
Jul 13, 2020 8,271
Jul 12, 2020 68,349
Jul 11, 2020 63,242
Jul 13, 2020 47,606
Jul 12, 2020 46,498
Jul 13, 2020 38,184
Jul 13, 2020 37,064
Jun 14, 2020 103,159
Jul 6, 2020 102,448
Jul 11, 2020 97,931
Jun 15, 2020 95,551
Jul 10, 2020 91,988